oo mar walba marka ka dambeysa ay qaxooti intii hore ka tiro badan ka soo gudbayeen xuduudda, oo ay xaaladda ammaankuna ka sii dareysey, ayaa saddex xero qaxooti oo ballaaran laga furey lama-degaanka dhexdiisa, meel 80 km u jirta, oo ay ku noolaan karaan 90,000 qof, oo loogu magac-darey magaalada ugu dhow ee Dhadhaab. Sida
magaalo oo kale waxaa ay leedahay suuqyo iyo dugsiyo “MSF iyo Dhadhaab sanado kooban ayaan mar ka tegey, waxaana aan u soo noqdey 1994 si aan uga shaqeeyo Dhagaxleey [oo ah mid ka mid ah saddexda xero ee Dhadhaab]. Xaaladda waqtigaa jirtey gebi ahaanba waa ay ka duwaneyn tan maanta. Ilaa xad waa ay degganeyd. Qaxootiga waxaa ay la qabsanayeen deegaankooda cusub waxaana
Xaaladda ammaanka ee gudaha iyo hareeraha xerooyinka ayaa aad uga darey bishii Oktoobar,iyada oo la af-duubey laba ka tirsan shaqaalaha MSF iyada oo af-duubkaasna uu dhacay waqti ay si xiriir ah u dhacayeen qaraxyo iyo toogashooyin. Tan iyo waqtigaas, waxaa la hakiyey dhammaan adeegyadii aan aasaasiga ahayn ee xerooyinka. Qaxootiga dhowaan yimid lama diiwaangeliyo hadda, waxaana ay ku khasban yihiin in ay ama la degaan saaxiibbo ama qaraabo ama ay is-debberaan. In kasta oo waxyaabo raashin lagu beddesho la qeybiyo, haddana dadka cusub ee yimaada ma helaan qalabka hoyga laga dhisto ama waxyaabo kale oo aasaasi ah. MSF waxaa ay sii waddaa in